पबित्रालाई ए’सिड हान्ने आलमको सनसनीपुर्ण बयान ! रूपको घमण्ड गर्न थालेपछि मलाई असह्य भएर ए,सिड हाने – Nepal Trending
पबित्रालाई ए’सिड हान्ने आलमको सनसनीपुर्ण बयान ! रूपको घमण्ड गर्न थालेपछि मलाई असह्य भएर ए,सिड हाने
काठमाडौं । पछिल्लो समय युवतीहरु ए,सिड आ,क्रमणको निशानामा परिरहेका छन्। नेपालमा पछिल्लो समयका घटनाक्रमहरुलाई हेर्ने हो भने एकतर्फी माया र त्यसको कुन्ठाका रुपमा ए,सिडलाई प्रयोग गरेको पाइन्छ। यसलाई ‘इगो’ ठानेर पुरुषहरुले ए,सिडलाई पुरुषत्वको वस्तुको रुपमा प्रयोग गर्दै आएका छन् । यस्तै, प्रेम प्रस्ताव नस्वीकार्दा वा कसैले गरेको प्रेमलाई नर्का’र्दा ए,सिड आ,क्रमणमा परेकी हुन्, २२ वर्षीया पवित्रा कार्की । ओखलढुङ्गाकी पवित्रा कार्की केही समययता काठमाडौंको एक तारे होटलमा काम गर्थिन् । लक डाउनको कहर छिचोल्दै उनको दैनिकी भर्खर लयमा फर्कन थालेको थियो । प्रायः उनी बाफलस्थित साँइली दिदीको डेरामा बस्थिन् ।
पवित्रा बिहीबार साँझ दही चिउरा लिनको लागि चोकमा निस्किएकी थिइन् । बेलुका खाना खान मन नभएको बरु दही चिउरा खाउ भन्दै पवित्रा भक्तपरे जुःजु धौँ लिन सितापाइलाको एक डेरीमा गएकी थिइन् । दही किनेर आउने क्रममा आलमले पवित्रालाई तल्लो चोकसम्म बाइकमा छाडिदिएका थिए । सोही चोकबाट आउने क्रममा पवित्राको घर नजिकै एउटा केटा तलतिर फर्किएर उभिएर बसेको पवित्राले देखेकी थिइन्, जस्ले नै पवित्रामाथि ए,सिड प्र’हार गरेका थिए ।
आत्तिएर कोठामा फर्किएकी पवित्राको अवस्थालाई देखे पछि उनलाई तजाब आ,क्रमण भएको छिमेकी तथा उनका आफन्तले अनुमान लगाए । सोही क्रममा तत्काल प्रहरीलाई खबर गरे । ए,सिड प्रहा’रको घटनाको सूचना पाउने बित्तिकै संलग्नको खोजीमा जुटेको प्रहरीले धेरै अलमलिनु परेन । सीसीटीभी फुटेज, प्रत्यक्षदर्शी र पीडितको प्रारम्भिक बयानकै आधारमा ए,सिड आ,क्रमण गर्ने र योजनाकार दुवैलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिन सफल भयो ।
पवित्राको कल डिटेल्सबाट : घटना घटेपछि प्रहरीले घटनामा पीडित पवित्रा कार्कीको मोबाइलको कल डिटेल निकाल्यो । जसले प्रहरीलाई अनुसन्धानका सूत्र पर्याप्त भयो । बाफलमा सामान किन्न गएकी उनलाई ३ घण्टाको बीचमा मात्रै मोह म्मद आलमले आफ्नो र मुन्ना महमदको मोबाइलबाट ३७ पटकभन्दा बढी मिस्डकल गरेको खुलेको प्रहरीले जनाएको छ ।
डल्लुका गार्मेन्ट सञ्चालक ४७ वर्षीय आलम र उनका भारतीय कामदार महमद प,क्राउ घटनाको तीन घण्टापछिनै परेका हुन्। प्रहरीले जनाए अनुसार आलमको योजनामा मुन्नाले ए,सिड प्र’हार गरेका हुन् । मुन्ना स्वयमले पनि बयानको क्रममा आलमले नै ए,सिड हान्न लगाएको बताईसकेको छन् । त्यसो त तयारी झोला लगायत सामान उत्पादन गर्ने आलमको कारखाना र कार्कीको डेरा नजिकै छ । उनकी दुई दिदी पनि केही वर्ष पहिले आलम कै कारखानामा काम गर्थिन् । पवित्राले पनि करीब १४ महिना सोही कम्पनीमा काम गरेकी थिइन् । होटलमा लेखा कर्मचारीको काम पाएपछि भने उनले आलमको गार्मेन्ट छाडेकी थिइन ।
सामाजिक सञ्जालमा पवित्राले ब्लक गरेकी थिइन् : पवित्राले आलमको हेराइ ठीक नलागेको र सामाजिक सञ्जालमा ब्लक गरेको प्रहरीलाई जनाएकी छिन्। कुराकानीबाट नियतमा खोट बुझेपछि उनले फेसबुक र म्यासेन्जरबाट आलमलाई ब्लक मात्रै गरेकी थिइनन्, मोबाइलमा कल नै रिसिभ गर्न पनि छाडेकी थिइन् । आफन्तसंग फोनमा कुराकानी गर्दापनि कता रु किन जस्ता प्रश्न गरेर आलमले हैरान पार्ने गरेको पवित्राले उनी साँइली दिदीसंग भन्दै आएकी थिइन् ।
आलम : १९ र १७ वर्षीय सन्तानका पिता : पवित्रा एसि,ड आ,क्रमण गर्न लगाउने योजनाकार आलमको १९ वर्षीया वर्षकी छोरी तथा १७ वर्षका छोरा छन् । आलम पनि श्रीमती र छोरा छोरी संगै बस्दै आएका छन् । ए,सिड प्र,हार गर्ने मुन्ना पनि श्रीमती र ८ महिनाकी छोरीसहित डल्लुमै बस्दै आएका छन ।
रूपको घम’ण्ड गर्न थालेपछि असह्य भएर ए,सिड आ,क्रमण गर्ने योजना बनाएको आलमको बयान : प्रहरीको नियन्त्रणपछि आलमले प्रारम्भिक बयानमा पवित्रालाई आफुले मन पराएको तर पबित्राले प्रेम प्रस्ताव अस्वी’कार नगरेको झोँकमा ए,सिड आक्र,मण सम्मको योजनामा पुगेको बता एका छन् । केही समय अघिबाटै प्रेम प्रस्ताव राखेको उनले बयान दिएका छन् । आल मले बयानको क्रममा भनेका छन्, ‘उनले रूपको साह्रै घमण्ड गरिन्, मैले मन परा उँथें तर कुनै मतलव नै गर्दिन थिइन्,’ ‘रूपको घमण्ड गर्न थालेपछि मलाई असह्य भएर ए,सिड हान्ने योजना बनाएँ ।’